Man Utd oo u dhaqaaqday laacib lagu qiimeeyo 80 Milyan | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Man Utd oo u dhaqaaqday laacib lagu qiimeeyo 80 Milyan
Man Utd oo u dhaqaaqday laacib lagu qiimeeyo 80 Milyan
Posted by: Mahad Mohamed February 9, 2019
Himilo FM –Waxay u muuqataa in kooxda Premier League ka dhisan ee Manchester United ay isha ku heyso xilli ciyaareedka soo aadan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon Tanguy Ndombele xagaaga suuqa kala iibsiga.
Spurs ayaa aheyd kuwii ugu horreeyay ee lala xiriiriyo isaga, kaddibna suuqa kala iibsiga ee dhawaan la xiray bishii Janaayo, magaca Manchester City ayaa ahaa dooq kale oo isagu lala xiriirinayay.
Laakiin haatan, waxay u muuqataa in Manchester United ay sidoo kale soo gashay tartanka ciyaaryahanka khadka dhexe. Sida laga soo xigtay wargeysyada Faransiiska, Red Devils ayaana indhaha ku heysa ciyaaryahanka khadka dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, Juventus iyo Inter ayaa ah labada kooxood ee hoggaaminaya tartanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe oo lagu qiimeeyo 80 milyan Euro, waana qiimaha uu rabo madaxa kooxda Lyon Jean-Michel Aulas.
Warbixinta ayaa sidoo kale ku dartay in Manchester City ay hore u soo bandhigtay € 50milyan oo ay ku dooneysay isaga taasi oo la diiday.
Si kastaba ha ahaatee, Lyon ayaa rajeyneysa inay hesho dalab qiimaheeda ka badan lacagtii u timid sannadkii hore.
Manchester United ayaa lasoo saxiixatay Fred xagaagii lasoo dhaafay, laakiin ciyaaryahanka reer Brazil ayaa ku guuldareystay in uu boos ka helo kooxdiisa.
Inkastoo laga yaabo inay jiraan caqabado badan oo ay ka mid yihiin xaaladda khadka dhexe ee Old Trafford, mana jiri karaan wax macquul ah in Red Devils ay 80 milyan oo Euros ku kharashgareyso laacib kale oo khad dhexe ah.
Previous: Ingiriiska: Bilyuneer doonaya buur uu iibsado!
Next: Hernandez: “ laba sanno kahor ayaan iska diiday inaan ku biiro Real Madrid.”